ဆောင်းပါးများ | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 22
” ရိုး သား တဲ့ ရှေ့ နေ ကြီး ”
May 31, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
တစ် ခါ က တ န င်္ဂ နွေ နေ့ အ လုပ် အား ရက် ည နေ ခင်း မှာ ရှေ့ နေ တစ် ယောက် ဟာ သူ့ ဒ ရိုက် ဘာ ကို သူ့ ရဲ့ ဇိမ် ခံ ကား အ ကောင်း စား ကြီး ကို မောင်း ခိုင်း ပြီး လယ် ကွင်း တွေ ရှိ တဲ့ မြိ့ ပြင် ဖက် ကို အ ပန်း ဖြေ ကား စီး ထွက် ခဲ့ ပါ တယ် ။
တစ် နေ ရာ ရောက် တော့ လမ်း ဘေး လယ် ကွက် တွေ အ နား မှာ မြက် တွေ စား နေ တဲ့ လူ နှစ် ယောက် ကို အံ့ အား သင့် ဖွယ် ရာ တွေ့ လိုက် ရ လို့ သူ့ ကား ဆ ရာ ကို ရပ် ခိုင်း ပြီး မြက် စား နေ တဲ့ လူ နှစ် ယောက် ကို ခေါ် ခိုင်း လိုက် တယ် ။
မြက် စား တဲ့ လူ နှစ် ယောက် အ နား ရောက် တော့ ဘာ ဖြစ် လို့ မြက် တွေ ကို စား နေ တာ လဲ လို့ သိ ချင် စိတ် နဲ့ မေး လိုက် ပါ တယ် ။ အဲ့ ဒီ အ ခါ မှာ လူ နှစ် ယောက် ထဲ က တစ် ယောက် က ကျွန် တော် တို့ မှာ အ စား အ သောက် ကို ဝယ် စား ဖို့ ပိုက် ဆံ မ ရှိ လို့ မြက် တွေ ကို စား ရ တာ ပါ လို့ မျက် နှာ ငယ် လေး နဲ့ ပြန် ဖြေ တယ် ။
အံ့ သြ သွား တဲ့ ရှေ့ နေ က ဒါ ဆို ရင် တော့ ငါ နဲ့ သာ လိုက် ခဲ့ လို့ ပြန် ပြော ပြီး သူ့ ကား ပေါ် တက် ခိုင်း လိုက် ပါ တယ် ။
မြက် စား နေ တဲ့ လူ က ဆ ရာ ရယ် ကျွန် တော့် မှာ မိန်း မ နဲ့ သား နှစ် ယောက် ရှိ ပါ တယ် လို့ မျက် နှာ ငယ် လေး နဲ့ ပြန် ဖြေ ပါ တယ် ။ ဒီ အ ခါ ရှေ့ နေ ကြီး က သူ တို့ ကို ပါ ခေါ် ခဲ့ ပါ လို့ ပြော လိုက် ပါ တယ် ။ တစ် လက် စ တည်း ကျန် နေ သေး တဲ့ မြက် စား နေ တဲ့ တစ် ယောက် ကို လည်း ခင် ဗျား လည်း လိုက် ခဲ့ ဆို ပြီး ကား ပေါ် တက် ခိုင်း တယ် ။
ကျန် နေ တဲ့ အ ခေါ် ခံ ရ တဲ့ လူ က ဆ ရာ ကျွန် တော့် မှာ လည်း မိန်း မ နဲ့ က လေး ခြောက် ယောက် ရှိ ပါ တယ် လို့ ပြန် ဖြေ ပါ တယ် ။
ရှေ့ နေ ကြီး က လည်း သူ တို့ ကို ပါ ခေါ် ခဲ့ ပါ လို့ မ ဆိုင်း မ တွ ပြန် ဖြေ တယ် ။
ပြီး တော့ ရှေ့ နေ ကြီး က သူ့ ကား ပေါ် ကို ဦး ဆောင် ပြီး တက် သွား ပါ တယ် ။ နောက် မ ကြာ ခင် မြက် စား နေ တဲ့ လူ နှစ် ယောက် နဲ့ မိ သား စု အား လုံး လည်း ကား ပေါ် ကို တက် လိုက် သွား ကြ တယ် ။
လမ်း ခု လပ် ရောက် တော့ လယ် သ မား တစ် ဦး က ဆ ရာ ၊ သင် ဟာ အ ရမ်း ကို ကြင် နာ သ နား တတ် ပြီး မြင့် မြတ် တဲ့ ပု ဂ္ဂိုလ် တစ် ယောက် ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒါ ကြောင့် ကျွန် တော် တို့ အား လုံး ကိုယ် စား ကျေး ဇူး တင် ကြောင်း ပြော ပါ ရ စေ လို့ မ ဝံ့ မ ရဲ နဲ့ ပြော ပါ တယ် ။
ဒီ အ ခါ မှာ ရှေ့ နေ ကြီး က
ဘာ မှ ပြဿနာ မ ရှိ ပါ ဘူး ။ ကျွန် တော့် အိမ် က မြက် တွေ က ခြေ ထောက် လောက် အ ထိ ကို ရှည် နေ ပြီ လို့ အေး အေး ဆေး ဆေး ပြန် ဖြေ လိုက် ပါ တယ် ။
လော က ကြီး မှာ ရှေ့ နေ ကြီး လို လူ မျိုး ကို တွေ့ ဖူး ကြ ပါ သ လား ။
တ ကယ် ရှိ ပါ တယ် ။ ဒါ ပေ မယ့် အဲ့ လို လူ က နှစ် မျိုး ရှိ တယ် ။
ပ ထ မ တစ် မျိုး က တစ် ဖက် လူ ရဲ့ အ ခက် အ ခဲ ကို ဘယ် တော့ မှ မ စဉ်း စား ပဲ သူ့ အ တွက် ပဲ ကြည့် တတ် တဲ့ လူ မျိုး ဖြစ် ပြီး ၊ ဒု တိ ယ တစ် မျိုး က တော့ တ ကယ် ကို ဘာ မှန်း မ သိ နိုင် တဲ့ လူ ပါ ။
တစ် ချို့ လူ တွေ ဟာ ဘယ် သူ သေ သေ င တေ မာ ရင် ပြီး ရော ဆို တဲ့ လူ မျိုး တွေ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဘယ် သူ တွေ ဘယ် လောက် ဒု က္ခ ဖြစ် နေ ပါ စေ အဲ့ ဒီ ဒု က္ခ ရောက် နေ တဲ့ အ ခြေ အ နေ က နေ သူ့ အ တွက် ဘယ် လို အ ကျိုး ရ နိုင် မ လဲ လို့ သာ စဉ်း စား ကြ ပြီး တ ကယ် လည်း အဲ့ ဒီ အ ပေါ် မှာ အ မြတ် ရ အောင် ထုတ် တတ် ကြ တယ် ။
ကြုံ တွေ့ နေ ကြ ရ တဲ့ တစ် ဖက် လူ ရဲ့ အ ခက် အ ခဲ ဒု က္ခ ကို လုံး ဝ စိတ် ဝင် စား ခြင်း မ ရှိ ပဲ သူ့ အ တွက် ပဲ ကြည့် တတ် တဲ့ လူ မျိုး ပါ ။ ကြမ်း တမ်း တဲ့ စိတ် ထား ရှိ ကြ ပြီး လက် အောက် ငယ် သား ကို ချ နင်း ဖို့ ဝန် မ လေး တတ် ကြ တဲ့ လူ မျိုး တွေ ပါ ပဲ ။ သွေး အေး ပြီး ရက် စက် တတ် တဲ့ သူ မျိုး တွေ ပေါ့ ။
နောက် တစ် မျိုး ဖြစ် တဲ့ ဒု တိ ယ လူ စား မျိုး က တော့ ပ ညာ မဲ့ တဲ့ လူ တန်း စား လို့ ပြော ရ နိုင် တယ် ။
သူ တို့ က တ ကယ် ကို ပဲ ပ က တိ အ ခြေ အ နေ တွေ ကို မ ခန့် မှန်း တတ် ကြ ဘူး ။ ပြော တဲ့ အ တိုင်း တ ကယ် အ မှန် ပဲ လို့ ယူ ဆ နေ ကြ တဲ့ သူ မျိုး ဖြစ် တွေ ပါ တယ် ။ ပြဿနာ ကိ စ္စ ကို လေး လေး နက် နက် မ စဉ်း စား တော့ ပဲ တစ် ယောက် ယောက် က ပြော လိုက် ရင် ပြော တဲ့ အ တိုင်း အ မှန် ထင် ပြီး ယူ ဆ သွား တတ် ကြ တယ် ။ Way of thinking လွဲ နေ တဲ့ သူ တွေ လို့ လဲ ပြော လို့ ရ ပါ တယ် ။
တစ် ချို့တွေ့ ဖူး ကြ ပါ လိမ့် မယ် ။ ရော မ မြို့ ကြီး ကို တစ် ရက် တည်း တည် ဆောက် နိုင် မယ် လို့ ထင် နေ ကြ တဲ့ သူ တွေ ကို ပါ ။ သူ့ ကို သာ အ ခွင့် ပေး ရင် ရော မ မြို့ ကြီး ကို တစ် မ ဟုတ် ခြင်း တည် ဆောက် လိုက် မယ် လို့ အ ယူ ရှိ ကြ တဲ့ သူ မျိုး ပါ ပဲ ။ သူ တို့ ဟာ တ ကယ် ကို ဖြစ် နိုင် တယ် လို့ ထင် နေ ကြ တတ် တယ် ။
ရှေ့ နေ ကြီး ပုံ ပြင် က အ နောက် တိုင်း ရီ စ ရာ ပုံ ပြင် ဖြစ် ပါ တယ် ။ ရှု ထောင့် အ မျိုး မျိုး က နေ တွေး လို့ ရ တဲ့ အ တွေး ကို ပေါ် စေ တဲ့ ပုံ ပြင် လေး တစ် ပုဒ် လည်း ဖြစ် တယ် ။
ဒါ ပေ မဲ့ လော က ကြီး မှာ ရှေ့ နေ ကြီး လို လူ တွေ ရှိ ပါ တယ် ။
ပ ထ မ တစ် မျိုး လို ရှေ့ နေ ကြီး လား ဒု တိ ယ တစ် မျိုး လို ရှေ့ နေ ကြီး တွေ လား တော့ မ သိ ဘူး ပြီး ခဲ့ တဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ ရေး တစ် လျှောက် ၊ အ စိုး ရ အ ဖွဲ့ တွေ တစ် လျှောက် ၊ ဝန် ထမ်း လော က တစ် လျှောက် များ ပြား စွာ ကြုံ တွေ့ ခဲ့ ရ ဖူး ကြ ပါ တယ် ။
ရှေ့ နေ ကြီး လို လူ မျိုး တွေ ကြောင့် ပြည် သူ တွေ မ ချိ သွား ဖြဲ ခံ စား ခဲ့ ကြ ရ ဖူး ပါ တယ် ။ မ ဖြစ် နိုင် မှန်း သိ ပေ မယ့် လည်း ခေါင်း ငြိမ့် ခဲ့ ရ တာ တွေ ၊ မ ဖြစ် သင့် မှန်း သိ ပေ မယ့် လည်း လက် ခံ ခဲ့ ရ တာ တွေ လူ တိုင်း လို လို မှာ အ နည်း နဲ့ အ များ ပဲ ကွား ခြား ကြ ပြီး ခံ စား ဖူး ကြ ပါ တယ် ။
နိုင် ငံ ရေး ၊ အ စိုး ရ အ ဖွဲ့ ၊ ဝန် ထမ်း လော က နဲ့ ပြည် သူ တွေ အ တွက် ဆို တဲ့ အ ဖွဲ့ အ စည်း တွေ ၊ တိုင်း ရင်း သား တွေ အ တွက် ဆို တဲ့ အ ဖွဲ့ အ စည်း တွေ မှာ ရှေ့ နေ ကြီး လို လူ တွေ ရှိ လို့ မ သင့် ပါ ဘူး ။ သူ တို့ ကို နေ ရာ ပေး လို့ မ ရ ပါ ဘူး ။ ပ ထ မ အ မျိုး အ စား လူ မျိုး ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ဒု တိ ယ အ မျိုး အ စား လူ မျိုး ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ဘယ် လို လူ မျိုး ကို မှ ပြည် သူ တွေ အ တွက် အ ခွင့် အ ရေး မ ပေး သင့် ပါ ဘူး ။
ကျွန် တော် တို့ တွေ ရှေ့ နေ ကြီး လို လူ တွေ ကို နယ် ပယ် အ သီး သီး တွေ ထဲ မှာ ကြုံ ဖူး ကြ ပါ သ လား ။ ကြုံ ခဲ့ ဖူး ကြ ပါ တယ် ။ အ ခု ကော ရှိ ကောင်း ရှိ နိုင် ပါ သေး တယ် ။
တ ကယ် နိုင် ငံ ကို တိုး တက် စေ ချင် တယ် သက် ဆိုင် ရာ အ ဖွဲ့ အ စည်း ကို တိုး တက် စေ ချင် တယ် ဆို ရင် တော့ သင့် တော် တဲ့ လူ တွေ ကို သာ ရွေး ချယ် ရ ပါ လိမ့် မယ် ။
အ များ အ ကျိုး အ တွက် ဆောင် ရွက် ကြ မယ် ၊ တိုင် ပြည် တိုး တက် အောင် ဆောင် ရွက် ကြ မယ် ဆို တဲ့ သူ တွေ ထဲ မှာ ရှေ့ နေ ကြီး လို လူ မျိုး တွေ ကို တာ ဝန် ပေး ဖို့ တော့ မ သင့် နိုင် တော့ ဘူး လို့ ယူ ဆ မိ ပါ တယ် ။
ရှေ့ နေ ကြီး လို လူ မျိုး တွေ ကို ကျွန် တော် တို့ ကြုံ ဖူး ကြ ပါ သ လား ။
မိုး တင့် ဆွေ
၂၇ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၆
သော ကြာ ။
May 29, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
စိတ်ကူးထဲက ဘဝ သို့သော် လက်တွေ့နဲ့တော့ တစ်ခြားစီ
၁။ ဖြစ်ချင်တာတွေက ဖြစ်မလာ သေး
စိတ်ကူးထဲက ဘဝကတော့ နှင်းဆီပန်းခင်းကြီးတွေ ဝေဆာနေပေမယ့် လက်တွေ့ကတော့ အဲလိုမဟုတ်။ ဘဝက ငြီးငွေ့စရာတွေ အတော်များနေ ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာသေးတော့ ရုန်းကန်လိုက်ပါအုံး။
၂။ ပန်းတိုင်ကို ရောင်အောင်သွားစိတ်ကူးထဲမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘဝကို အပြင်လက်တွေ့မှာ အရောက်သွားနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားဖို့ မမေ့နဲ့။
၃။ ရိုးသားပါ ကြိုးစားပါ အလွယ်လမ်းကို မကြိုက်နဲ့
စိတ်ကူးထဲက ဘဝကို ရောင်အောင် သွားဖို့အတွက် ရိုးသား၊ ကြိုးစား ပြီး လတ်တလောကို မကြည့်ဘဲ ရေရှည်ကို မြင်ပါ။ ဒါမှသာ မိမိဘဝ အဆုံးသတ်အထိ ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတိုင်း ခက်တယ်
ဘဝမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ ရတာတွေ မှန်သမျှဟာ တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ မပြောလို ပေမယ့် တန်ဖိုးရှိတာတွေ ရဖို့ကတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆန္ဒတွေပြည့်ဖို့ ရုန်းကန်ရမှာပေါ့။
၅။ ဘယ်နေ့ သေမလဲ ဆိုတာ မသိ
လူတစ်ယောက် မွေးဖွားလာပြီ ဆိုရင် သေဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒါက သေချာတယ်။ စိတ်ကူးထဲက ဘဝကို ရောက်အောင်သွားဖို့ အတွက် မမှန်မကန် မလုပ်စေချင်ဘူး။ အသက် ရှင်နေတဲ့ ကာလလေးမှာ မှန်ကန်မှုတွေ ရှိစေပါ။
ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက်
၁။ လူတိုင်းကို အထင်မသေး မိစေနဲ့။
၂။ မိမိအရမ်းတော်ပါလား ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ မာန မထောင်မိစေနဲ့။
၃။ ကျေးဇူး ရှိဖူးတဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးမကန်းမိစေနဲ့။
၄။ အရာရာကို အလေးအနက် ထားပါ။
၄။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီ။
၅။ အလုပ်အပေါ် သစ္စာရှိ။
၆။ ကတိ၊ သစ္စာနဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာဆိုတာတွေကို အလေးအနက်ထားပါ။
၇။ စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်း မိမိပန်းတိုင်ကို သတိရပါ။
၈။ အားလပ်ချိန် ရှိပါစေ။
၉။ အသက်ကြီးပြီး ဗဟုသုတ ရှိသူများနဲ့ ခဏခဏ စကားပြောပါ။
၁၀။ မိဘကိုလည်း ပြုစုဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ရိုင်းပြမှုတွေ၊ စွပ်စွဲမှုတွေကို အချိန်တိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ အဲဒိအကျင့်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ခွင်နဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြစ်တွယ်နေပါပြီ။ မေးစရာရှိတာက အဲဒိအကျင့်တွေက ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သလဲ??မကောင်းတဲ့ အမူအရာတွေဖြစ်တဲ့ စိတ်မြန်ခြင်း၊ ဒေါသကြီးခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်းတို့ဟာ အန္တရာယ်ရှိတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုင်းစိုင်းပြီး ယဉ်ကျေးမှူမရှိတာက ဘယ်လို အန္တရာယ် ရှိပါသလဲ??
ကျွန်ုပ်တို့ သစ်ပင်တွေရဲ့ အရိပ်အာဝါသကို မက်မောတောင့်တပြီး သူ့တို့အလှတရားကို သဘောကျကြပေမယ့် သစ်ပင်တွေအကြောင်းတော့ သိပ်သတိမထားမိကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် သစ်ပင်လောကအကြောင်း လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အရာတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သစ်ပင်တွေ အထီး၊ အမဖြစ်နိုင်သလို့ နှစ်ခုစလုံးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
၂။ သစ်ပင်တွေဟာ လူတွေ အသက်ရှုခြင်းနဲ့ ဝင်သက်ထွက်သက်အတွက် ကောင်းကျိုးပြုသောအရာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
၃။ သစ်ပင်တွေက ကောင်းမွန်တဲ့ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ တချို့သစ်ပင်တွေ ရန်သူ သားရဲ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ရန်ကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ္စည်းတွေ ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။
၅။ ဒီသစ်ပင်တွေဟာ ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရင့်ဆုံး သက်ရှိတွေထဲ ပါဝင်ပါတယ်။
၆။ အရေးစိုက်ပေးခြင်းက သစ်ပင်ကို ပိုမိုကြံ့ခုိုင်သန်မာစေပါတယ်။
၇။ မှိုတွေက သစ်ပင်တွေ ရှင်သန်ပေါက်ရောက်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။